Faahfaahin ku saabsan doorashada guddoomiyaha golaha deegaanka iyo Duqa magaalada Galkacyo. [Akhris …] – Radio Daljir
Faahfaahin ku saabsan doorashada guddoomiyaha golaha deegaanka iyo Duqa magaalada Galkacyo. [Akhris …]
Agoosto 27, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 27- Golaha deegaanka ee magaalada Galkacyo ayaa maanta si rasmi ah u doortay guddoomiyaha golaha deegaanka iyo sidoo kale duqa magaalada Galkacyo iyo kuxigeenadoodii.
Guddoomiyaha golaha deegaanka ayaa loo doortay in uu noqdo Farxaan Cali Xirsi, halka guddoomiye ku xigeenkiisana loo doortay Axmed Muuse Nuur ‘Daba-kariix’ waxaana sidoo kale duqa magaalada loo doortay C/rixmaan Maxamuud Xaaji Xasan, halka ku xigeenkiisana loo doortay C/laahi Ibraahim Qooje.
Codbixnta lagu doortay guddoomiyayaasha iyo kuxigeenadooda oo ahayd mid qarsoodi ah, ayaa waxaa codaynayey 29 xildhibaan oo ka mid ah 31-da xubnood ee ay ka kooban-yiin golaha shacabka ee magaalada Galkacyo, waxaana jagooyinka duqa magaalada iyo golaha deegaanka iyo kuxigeenadooda isku soo taagay 8 murashax , kuwaasi oo u kala tar-tamayey guddomiyaha golaha shacabka iyo kuxigeenkiisa, duqa magaalada Galkacyo iyo kuxigeenkiisu.
Jagada guddoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Galkacyo, ayaa waxaa isku soo taagay laba murashax oo kala ahaa Farxaan Cali Xirsi iyo Xasan Xuseen Aw-maxamed ‘Walloore’.
Waxaana loo qaaday codbixin qarsoodi ah oo ah habka santuukh ku codaynta, waxaana wareeggii koowaad ku soo baxay Farxaan Cali Xirsi, oo ku guulaystay codad dhan 19 cod, halka murashaxii la tar-tamayey ee Xasan Xuseen Aw-Mxamedna uu halay 10 cod, waxaana markaasi kadibna guddi doorashadu ay ku dhawaaqeen in uu guddoomiyaha golaha shacabka ku guulaystay Farxaan Cali Xirsi, waxaana isla goobtaasi ugu hambalyeeyey Murashaxa laga guulaystay ee Walloore.
Guddoomiye kuxigeenka golaha shacabka, ayaa waxaa isku soo taagay oo kaliya hal murashax oo lagu magacaabo Axmed Muuse Nuur ?Dabo-kariix? waxaana isaga laftigiisa loo qaaday habka santuukh ku codaynta ah amaba codbixinta qorsoodida ah waxaana u codeeyey 26 xildhibaan halka 3 ka mid ahna ay diideen, waxaana uu ku guulaystay guddoomiye kuxigeenka 1-aad ee golaha deegaanka Galkacyo.
Dhanka duqa magaalada Galkacyo ayaa waxaa isku soo taagay laba murashax oo kala ahaa C/rixmaan Maxamuud Xaaji Xasan, iyo Axmed Cali Salaada oo ahaa duqii hore ee magaalada Galkacyo.
Waxaana iyana loo qaaday codbixin wareeggii 1-aadna waxaa ku soo baxay C/rixmaan Maxamuud Xaaji Xasan, oo ku guulaystay codad dhan 20 cod halka duqii hore ee magaaladuna uu helay codad dhan 9, waxaana halkaasi duggiga doorashadu kaga dhawaaqeen duqa magaaladu in uu yahay C/rixmaan Maxamuud Xaaji Xasan, iyadoo duqii horana uu si weyn ugu hambayeeyey isagoo sheegay in uu ku faraxsan-yahay sida looga guulaystay.
Jagada kuxigeenka duqa magaalada Galkacyo, ayaa iyana waxaa isku soo taagay saddex murashax oo kala ahaa C/laahi Ibraahim Qooje, Daahir Maxamuud Muuse iyo Cabdi Cismaan Faarax ?Ciiro? waxaan wareeggii koowaad soo baxay C/laahi Ibraahim Qooje oo helay 17 cod, Daahir Maxamuud Muuse oo helay 9 codm kuwaasi oo u gudbay wareegga labaad ee codbixinta, waxaana halkaasi ku haray Ciiro oo isagu helay 3 cod oo kaliya.
Wareeggii 2-aad ee codbixinta ayaa waxaa ku soo baxay C/laahi Ibraahim Qooje oo harayna u ahaan jiray kuxigeen duqa magaalada waxaana uu helay codad dhan 14 cod halka murashaxii la tar-tamayeyna uu helay 13, waxaana xumaaday labo cod oo aan midna loo tirin, waraaqahaasi oo si khaldan xildhibaanadu u qoreen.
Labadaan mas?uul ee ay ugu danbeysay doorashadoodu, ayaa iyana si wanaagsan iskugu hambalyeeyey, waxaana mas?uulkasta oo laga guulaysto uu sheegayey in uu si daacadnimo ah ula shaqeyn doono saaxiibkiisa ka guulaystay.
Markii ay dhammaatay doorashada guddoomiyayaasha iyo kuxigeenadooda, ayaa misna dib loo bilaabay in loo dhaariyey xilalka loo doortay, iyadoo dhammaan mas?uuliyiinta la doortay ay ku dhaarteen shacabka hortiisa iyagoo wacad ku maray in ay si wanaagsan u gudan doonaan waajibaadka loo xilsaaray.
Madasha ay ka dhacaysay doorashadaan oo ahayd Hotel Taar, ayaa waxaa goob-joog ka ahaa m/weynaha dawladda Dr C/rixmaan Maxamed Maxamuud Faroole, C/samad Cali Shire, xubno badan oo ka tirsan golayaasha dawladda gaar ahan xukuumadda iyo baarlamaanka, iyi dadweyne aad u tiro badan oo iskugu jiray qaybaha kala duwan ee bulashada gobolka Mudug.
M/weynaha oo la hadlayey mas?uuliyiinta maanta la doortay, ayaa sheegay in uu ku faraxsan-yahay habka doorashadu u dhacday oo uu ku talmaamay in ay ahayd mid dimuqraadiyad ku salaysan isla markaana ah mid caddaaladeed.
M/weynuhu waxaa kuu kala dar-daarmay xubnaha maanta loo doortay maamulka magaalada Galkacyo, in ay ka shaqeeyaan hormarinta dadka iyo deegaanka isla markaana ay u hoggaansamaan shuruucda dalka hab hufnaani ku jirtana ay ku shaqeeyaan.
Waa doorashadii ugu horraysay oo nooceeda ah oo laga qabto magaalada Galkacyo tan iyo markii la dhisay dawladda Puntland sanaddii 1998-dii, waana middii ugu horraysay oo Puntland ay samayso oo kala saaraysa maamulka golaha shacabka iyo mid degmada.
Magaalada Galkacyo, oo hadda ay ku sugan-yiin mas?uuliyiintii ugu sarraysay dawladda waxay noqotay magaaladii ugu horraysay oo loo sameeyo maamulk gole deegaan iyo mid degmo kadib markii dhammaanba ay dhaceen golayaashii deegaanku.
C/fitaax Cumar Geeddi?
Ciidankii dawladda ee joogay Hiiraan oo gadooday iyo Guddoomiyaha Ahlu-sunna oo gaaray Beledweyn. [Akhris …]
Mid ka mid ah la haystayaashii Faransiiska ahaa oo dawladda Soomaaliya u gacan galay. [Akhris …]